जापानबाट आयो श्रम समझदारी मस्यौदा, अब छिट्टै दुई स्ट्याटसका कामदार आपूर्ति गर्ने ! - PUBLICAAWAJ
जापानबाट आयो श्रम समझदारी मस्यौदा, अब छिट्टै दुई स्ट्याटसका कामदार आपूर्ति गर्ने !
प्रकाशित : सोमबार, चैत ०४, २०७५११:०० पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
केहि दिन अघि मात्र नेपाल र जापानबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी)मा सहमति भएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार जापान सरकारले कामदार भर्ती र आपूर्ति बारे अवधारणा पत्र पठाएको थियो ।
नेपाल सरकारले उक्त मस्यौदा माथि अध्ययन शुरु गरेको छ । उक्त मस्यौदामा अन्तिम चरणको छलफल गर्न जापानी श्रम अधिकारीको प्राविधिक टोली काठमाडौँ आउने कार्यक्रम रहेको छ । जापानी सरकारले नेपाली कामदार भित्र्याउनको निम्ति नीतिगत प्याकेजको घोसना गरेको छ ।
यसको निम्ति देशभरमा नेपाली सहित ११ भाषामा सहायता प्रदान गर्न १ सय परामर्श केन्द्र खोलिने बताइएको छ । जापानले नेपाल मात्र नभएर चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट पनि कामदार लैजाने योजना बनाएको छ ।
कामदारहरुलाई दुईवटा स्ट्याटस दिइने बताइएको छ । पहिलो स्ट्याटस अन्तर्गत जापान जाने कामदारहरुलाई भाषाको आधारभूत ज्ञान मात्र भए पुग्नेछ र उनीहरु ५ बर्ष बस्न पाउनेछन् तर परिवार लैजान पाउनेछैनन् ।
त्यसैगरी दोश्रो स्ट्याटस अन्तर्गत कामदारहरुलाई भाषा सम्बन्धि आधारभूत ज्ञानको साथ साथै निश्चित काममा दक्षता पनि चाहिन्छ । उनीहरुले परिवारलाई पनि साथ लैजान पाउनेछन् र पटक पटक भिसा नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।
कारगार भत्किदा ७ जनामो मृत्यु